बजेट नहुँदा औषधि अभाव | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार बजेट नहुँदा औषधि अभाव
बजेट नहुँदा औषधि अभाव
रुकुम (अस) । रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिका–२, स्यालाखदीकी २४ वर्षीया रमला बोहरा ५ दिनअघि ज्वरो आएपछि उपचारका लागि गाउँको स्वास्थ्यचौकी पुग्दा त्यहाँ उपचार त भएन, औषधिसमेत नपाएपछि रित्तो हात घर फर्कन बाध्य भइन् ।
यस्तै समस्या यहाँ थुप्रैले व्यहोरिसकेका छन् ।
विगत २ महीनादेखि यहाँको स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल र आइरन चक्कीजस्ता सामान्य औषधिसमेत छैन । दैनिक आउने गाउँका बिरामीले स्वास्थ्यचौकीबाट रित्तो हात फर्कन बाध्य हुनुपरेको त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । अन्य गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा पनि अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा पर्ने सिटामोल, आइरन चक्कीलगायतका औषधि नपाएपछि बिरामी मर्कामा परेका हुन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुकुमका प्रमुख डा. सविन पोखरेलका अनुसार बजेट नहुँदा औषधि खरीदमा समस्या भएको हो । उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको छ । तर, स्थानीय तहले औषधि खरीदमा चासो नदेखाउँदा समस्या भएको छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा ६ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले स्वास्थ्यको बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
स्थानीय तहले स्वास्थ्य बजेटअनुसार औषधि खरीद नगर्दा औषधि अभाव हो । सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले बजेट चालू आवमा झण्डै ७० लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म १० लाख रुपैयाँको औषधि खरीद गरिएको छ ।’ तर, रुकुम पूर्व र पश्चिमका ९ स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार औषधि खरीद नगर्दा समस्या रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भने पनि मुस्किलले १०÷१५ प्रकारका औषधि जिल्ला अस्पतालमा मौज्दात रहेको डा. पोखरेलले बताए । ‘बिरामीको चाप बढे १ महीनामा औषधि अभाव हुने देखिएको छ,’ उनले भने ।